Ifektri - UFoshan Cerarock Ceramics Co, Ltd.
I-CERAROCK yocwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa, izinsizakalo kwelinye lamabhizinisi anamuhla e-ceramic, ngomshini wokuphrinta we-sakomi wezwe jikelele, umshini we-inkjet we-digital digital color, neminye imishini yokukhiqiza.
Azikho izimpahla ezizothunyelwa kumakhasimende ethu ngaphandle kokuthi zihlolisiswe ngokuphelele yiQembu leCERAROCK QC; Akukho ukuthengiswa okuzoxhumana namakhasimende ngqo ngaphandle kokuhlala endaweni yokufundela ukuze ufunde inqubo yokuhlola nekhwalithi yokuhlola; "Igama lami siyisiqinisekiso sakho". ------ CERAROCK
I-OEM ne-ODM Yamukelwe.
I-MOQ ye-OEM: Isitsha esisodwa semikhiqizo yokuPrinta ye-Inkjet.
Isidingo se-OEM: Ama-Pls ahlinzeka ngamasampula wangempela wesampula noma izithombe eziphezulu ezenzelwe thina ukuzama imikhiqizo ehambelana kakhulu nawe. Sizoqinisekisa ukuthi isampula lethu liyanelisa ngokuphelele, bese siqala ukukhiqiza ngobuningi.
ISIBONELO: I-300X600MM IWAYILE ITAYELWE KU-2 SURFACE:
ISIBONELO: I-600X600MM FLOOR TILE:
Ukukhiqizwa Kwezitini Zokhuni:
Ukukhiqizwa Tile Okugcwele kwe-B Leo Porcelain
Ukukhiqizwa Kochungechunge lweTerrazzo:
Kuqediwe Ukupakishwa Komkhiqizo:
Kuqedwe Ukugcinwa Komkhiqizo: